Mucjiso Rabi: Nin Ka Badbaaday 2-Xabbo Oo Rasaas Ah Oo Wadnaha Ka Cuskaday | Hawraar
September 26, 2014 Xiisaha/Xulashada No comments
Mucjiso Rabi: Nin Ka Badbaaday 2-Xabbo Oo Rasaas Ah Oo Wadnaha Ka Cuskaday
Xaalada nin u dhashay dalka Hindiya oo rasaasi ka haleeshay wadnaha ayaa dadka caafimaadka ka hawl gala ku noqotay, mucjiso iyo layaab, waxaana ninkani uu ka badbaaday rasaastaas ka cuskatay wadnaha oo dadka badankoodu aamineen in aanu ka kici doonin.
In kasta oo qofkii Alle Badbaadinayaa wax walba ka noolaado, haddana xaalada ninkani la kulmay ayaa ahayd mid quus u eg, waxaana ninkan oo lagu magacaabo, Bharat Sharma, sodon jirna lagu sheegay da’diisa, rasaas af-saar ah wadnaha kala eegtay koox tuug ah oo wakhtigaas weerar dhac ah ka gaysanayay bangi ku yaala degaanka uu ku nool yahay.
Sida ay ku warantay jariirada Daily Mail ee Dalka Ingiriiska ka soo baxda, Bharat Sharma ayaa isaga oo ku sugan Bangi ku yaala gobolka Pradesh ee bariga dalka Hindiya, wakhti laba bilood laga joogo la kulmay, weerar dhac ah oo koox tuug ahi ku soo qaaday baanka, waxaanay ku fureen rasaas, labo xabadood oo ka mid ahi ku dhacday ninkan, taas oo wadnaha ka haleeshay, sida wararku sheegayaana labada xabadoodna dhex fadhiisteen.
Ninkan ayaa cusbitaalka loola cararay isaga oo geeri iyo nolol xaaladiisu u dhaxayso, waxaana dhakhaatiirtu qaliin ay ku sameeyeen, wakhtigaas ay ku guulaysteen in mid ka mid ah xabadihii rasaasta ay wadnihiisa ka saaraan, halka ta kalana ay ku go’aansadeen in haddii uu noolaado ay mar danbe ka saaraan.
Sida dhakhaatiirta cusbitaalka Sal Ani Jan ee bariga dalka Hindiya oo lagu dawaynayo ninkani ku warameen, ka saarista xabada labaad ee dhex fadhiisatay wadnaha ninkan ayaa ahayd, xaalad ka adag tii hore rasaasta lagaga saaray, waxaana rasaastan oo ka haleeshay wadnaha qaybta ugu xasaasin ay sababi karaysay inuu deg deg u dhinto.
Laakiin qaliin qaatay sadex saacadood ka dib waxa ay dhakhaatiirta Hindiya ku guulaysteen in rasaastii labaad ay ka saaraan wadnihiisa, xalaadiisuna aad u wanaagsanaato muddo saacado ah markii gar gaar sareeya loo sameeyay.
Isku soo wada duubo dhakhaatiirta iyo hawl wadeenada caafimaadka ayaa aad uga yaabay xalaada ninkan iyo sida uu geeri uga badbaaday, waxaana u cadaatay in nolosha iyo geeridu aanay ku xidhnayn wax qofka ku dhaca, culays kasta iyo awood walba ha lahaadee.